Soomaalida waa reer miyi isla weyn waxaa sidaa tiri dhakhtarad Novak - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomaalida waa reer miyi isla weyn waxaa sidaa tiri dhakhtarad Novak
Ma nihin rabshad wadeyaal
La daabacay torsdag 22 januari 2015 kl 15.38
Soomaalidu waa reer miyi, waa dad dagaal badan. Aan fekerin oo marka hore wax dila oo dabadeed ka fekera falkii ey sameeyeen. Waa dad isla weyn, qaylo badan, marka ey hadlayaanna aad mooddo iney ciid cuneen.
Ereyadaasi waxey ka mid ahaayeen farriin dhambaal ah oo dhakhtarad Alena Novak oo ka howl-geli jirtay iskuullo ka mid ah iskuullada ey dhigtaan dhallaanka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Trollhättan, farriintaasina oo la gaarsiiyay dhamaan kalkaaliyeyaashii caafimaad ee iskuullada ka howl-geli jirey ama ka howl-gala, sida uu idaacadda Radio Sweden laanteeda af-soomaaliga u sheegay Maxamed Yuusuf Xassan oo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey ku dhaqnaa magaaladaa, isla-markaana ah xoghaynta urur ey ku mideey-san yihiin ururrada soomaalida, laguna magacaabo "Somaliska islamiska kultur center".
Haddaba dhambaalkan farriinta ay qortay dhakhtarad Alena Novak, ayaa dhaliyay dood ballaaran kadib kolkii ay soo shaac-baxday iyadoona iska casishay, isla-markaana laga saaray xisbiga Mudaraterna oo ay u mataleeysay hoggaanka degmada waaxda dhaqanka iyo mushaaxa, waxa loo yaqaanno - kultur och fritid, hase yeeshee aanay howshii dhakhtar-nimo oo ey ka haysay goobaha tacliinta aanay saameeyn ku yeelan. Halka uu hoggaanka degmadu digniin siiyay kalkaaliso caafimaad oo dhakhtaraddu farriintaa u dirtay iyaduna u sii kala dirtay kalkaaliyeyaashii caafimaad. Middaasi ayaa sabab looga dhigay in aan loo baahnayn in dhambaalkaa farriimeed la sii baafiyo, sida uu sheegay war aannu ka soo xiganney laanta idaacadda P4 ee Västergötaland:
- Waxaan marka ku fekeray in la ogaado taariikhda iyo hab-fikirkooda. Ma waxaad doonaysay inaad u digto?
- Maya inaan u digo ma doonayn waxay iga ahayd oo keliya war-bixin guud un, sida ay sheegtay Alena Novak.
Haddaba si aannu wax uga waydiinno Alena Novak, dhambaalkeeda farriinta oo ka careeysiiyey soomaalida ku dhaqan nawaaxiga Trollhättan ayaan khadka telefoonka kula xiriirney, maadaama ay sheegtay in si khaldan loo tarjumay dhambaalkeedi, hase yeeshee ka gaabsatay inay ka jawaabto su'aalihii aannu damac-saneyn inaannu wax ka weydiinno ama bayaaninno is-fahanka ay Alena Novak sheegtay in si khaldan loo tarjuntay dhambaalkeedi farriinta.
Halka uu Maxamed Yuusuf Xasan sheegay in amuurtan ay ka careeysiisay soomaalida ku dhaqan nawaaxiga Trollhättan, isla-markaana ey bilaabeen sidii ey dacwad ka dhan ah ugu gudbin lahaayeen xafiiska ka hor-tagga cunsuriyadda, isagoona ku tilmaamay in falkani yahay mid cunsuriyadeed oo faqooq salka ku haya.